मेरो व्यक्तिगत विचार मा जा गर्न जिम बस अर्को बाटो लागि बैठक विपरीत सेक्स जस्तै, एक डेटिङ सेवा । लागि रूपमा बैठक मान्छे म बैठक जस्तै छ जो कसैले यस्तै गतिविधिलाई जस्तै खेल, चलचित्रहरू किनभने म जस्तै विदेशी सिनेमा हिन्दी, बलिउड विशेष(मेरो ख फा समर्थन मेरो सार्क खानले हेर्ने बानी) साथ अमेरिकी कमेडी, नाटक र वृत्तचित्र छ । जा राजनीतिक अर्को राम्रो तरिका यति छ कि तरिका थाह छ, निश्चित लागि तपाईं देख्न आँखा मा आँखा छ कि केहि तपाईं धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यदि मेरो प्रेमी र म केही थियो मा यो साधारण प्राप्त हुनेछ पुरानो र म बाहिर एक तरिका पाउन को सम्बन्ध छ । उहाँले र म सधैं मजा छ कि किनमेल लागि सम्झौता (उहाँले फेला एक ठूलो हिजो । (प्रयोग डलर छ । मात्र), बस लिएर एक सानो भ्रमण जहाँ हामी बाँच्न वा हेरिरहेका एक डीभिडी या डीभिडी र छलफल वर्तमान घटनाहरू । एक मित्र पनि परिचय जो कसैले लागि सही हुन सक्छ किनभने तपाईं थाह जो तपाईं भन्दा राम्रो मित्र छ । म व्यक्तिगत रुचि एक अनियोजित, बस मौका द्वारा, प्रकार को बैठक । साँच्चै, अधिक महत्वपूर्ण छ भने कसरी र छैन गर्दा वा कहाँ । रूपमा आफैलाई लागि, म पक्कै पनि आशा कसरी म पूरा हुनेछ एक मान्छे म संभवतः हुन, रुचि हुनेछ निश्चित हुन हौसले, मेरो कपाल संग काम, वा हेर्दा केहि सभ्य, मेरो बनाउन-अप मा र को पाठ्यक्रम आशा, म महसुस छु मेरो मनोवृत्ति र व्यक्तित्व छन् यसको सबै भन्दा राम्रो मा मन एक मान्छे हडताली माथि कुराकानी मा एक जिम, तर सबै इमानदारिता मा, मेरो ध्यान हुनेछ अधिक संभावना ध्यान केन्द्रित रहन मेरो कसरत. मलाई लाग्छ मैले महसुस हुन सक्छ एक बिट अजीब संग बैठक एक आगन्तुक छु भने सबै तातो र मिठास र भावना, म हुन सक्छ को आवश्यकता मा एक शट को दुर्गन्ध । पनि, जहाँसम्म एक स्टोर, यो निर्भर हुनेछ कस्तो स्टोर । म घृणा किराना किनमेल, त्यसैले म छु र बाहिर रूपमा छिटो सम्भव छ । लगभग कहीं अरू. एक अन्त्येष्टि हुन सक्छ एक सानो अजीब हुनत, म अनुमान हुनेछ केही ठाउँमा म गर्न रूचाउँछु नजिक ।, मन एक मान्छे मलाई आउँदै एक स्टोरमा, जिम, या पनि एक क्लब हो । रूपमा लामो रूपमा पहिलो कुरा तिनीहरूले मलाई भन्न छैन केही घटिया लाइन जस्तै, यो गरे चोट । जब तपाईं गिर स्वर्गबाट.
मूल र वास्तविक । आउन सही संग बाहिर. तपाईं लाग्छ भने त्यो सुन्दर छ, उनको बताउन । एक केटी सक्छ को थकित प्राप्त कहिल्यै सुनेर । तपाईं, हुनेछ के थाहा कहिल्यै. तपाईं को दुई बस सोच हुन सक्छ यो नै कुरा हो । तर, यो गर्दैन भने, त्यसपछि यो ठीक छ । यो बस थिएन.
सबै को पहिलो
यो देखाउँछ एक बलियो विशेषता तपाईं विश्वस्त छन् कि आफ्नो निर्णय र यो बनाउँछ भन्ने व्यक्ति कि राम्रो महसुस तपाईं छन् भनेर विश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ मिति. जब तपाईं छन् कि मिति मा छनौट, एक रेस्टुरेन्ट भनेर देखाउन को एक सानो टुक्रा तपाईं र तपाईंको रोमान्स पक्ष, किनभने जस्तै कसरी सबैले भन्छन् बस आफैलाई हुन, तपाईं देखाउने छन् आफैलाई गर्न उनको छ । गुमाउन कहिल्यै, आँखा सम्पर्क, तर उनको मा हेर्न रूपमा छ भने त्यो आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र छ । म यो थाहा हुन सक्छ अजीब विशेष गरी भने, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र एक मान्छे छ, तर सान्त्वना कि तपाईं उनको वरिपरि खोल्न हुनेछ उनको व्यक्तित्व. बनाउने उनको हांसो सधैं एक राम्रो कुरा, मजाक बताउन, देख्न जान एक हास्यास्पद चलचित्र, वा बारेमा कुरा हास्यास्पद कथाहरू को आफ्नो अतीत. उनको लिन बाहिर मा एक पैदल पछि वार्ड, वा एक ड्राइव भने, यो बाहिर चिसो, र आफ्नो राख्नुहोस् मिति न्यानो । प्रश्न बारे उनको रुचि के गर्छ त्यो एक जीवित लागि के भने, त्यो आउँछ एक ठूलो परिवार, आदि. बस प्रश्न छ कि छैन धेरै जानकारी को लागि सोधेर छैन । मा रात को अन्त कि उनको बताउन तपाईं साँच्चै सराहना संग समय खर्च र उनको साँच्चै हेर्न चाहन्छु फेरि उनको छ । आँखा सम्पर्क. यदि त्यो भन्छन्, म साँच्चै जस्तै, कि त उनको बताउन आशा, तपाईं एक सुखद रात (उनको नाम) । हेर, उनको मुस्कान फेरि हिँड्न सुरु देखि फिर्ता ढोका अझै पनि सामना गर्न उनको र हँसिला र आफ्नो फिर्ता बारी सम्म त्यो ढोका प्रवेश. त्यसपछि तपाईं बस आफैलाई मिल्यो अर्को मिति, किनभने देखि तपाईं उनको चुम्बन मा सबै, मात्र गर्छ त्यो चुम्बन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं द्वारा अर्को मिति. त्यो पनि अब चासो संग सम्बन्ध मा तपाईं किनभने तपाईं बस देखाए उनको केही वर्ग कि छैनन् टी एक, र तपाईं साँच्चै उनको रुचि हो र अब त्यो बस प्राप्त गर्न चासो को एक धेरै तपाईं छ । सबै भन्दा राम्रो तरिका बालिका पूरा गर्न छ, एक पुस्तक पसल मा. हुनत किनभने मान्छे भन्ने विचार गर्छन क्लब वा जिम हुन सक्छ एक राम्रो ठाँउ, एक क्लब हो । भने एक केटी पिउने छ, त्यो छ छैन आफु र तपाईंलाई थाहा छ त्यो हेर्न प्रयास राम्रो छ । जिम मा पाऱ्यो भने त्यो गम्भीर छ बारे उनको कसरत. तर एक पुस्तक पसल, तपाईं वास्तवमा पाउन सक्छौं छ कि कुनै चासो र तपाईंलाई थाहा छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ छ जो एक प्लस छ । तपाईं थाह म के मतलब. गहिराई । गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका महिलाहरु पूरा गर्न छ सामेल एक. फुटबल । यो एक सुरक्षित वातावरण जहाँ सबैलाई अन्ततः थाह हुन्छ. थियो किस्मत मा डेटिङ साइटहरु, किनभने अधिकांश मानिसहरूले हुन लाग्न को लागि बाहिर त्यहाँ बस एक राम्रो समय छ । छ भने के तपाईं चाहनुहुन्छ, त्यसपछि डेटिङ साइटहरु जाने बाटो हो. जा एकल जमघट जहाँ मित्र समन्वित छ घटना को अर्को तरिका बैठक केटी । म आनन्द बस रही बाहिर त्यहाँ म देख्न भने र एक सुन्दर मानिस किराना पसल, आदि. म भन्न हुनेछ, नमस्ते र छ कि एक उत्कृष्ट समय कुराकानी सुरु. तपाईं प्राप्त हुन सक्छ भाग्यशाली र प्राप्त सम्पर्क नम्बर । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं कसैले देख्न भने तपाईं आकर्षित गर्न बाहिर र बारे, तर भन्न, नमस्ते वा केहि प्राप्त गर्न, उनको ध्यान जस्तै एक प्रश्न छ, अर्थात् के तपाईं कहिल्यै प्रयास यस अघि र यति भने, यो के रुचि छ? भने छैन, त्यसपछि संग आउन अरू केही भन्न छिटो पूरा गर्न र संलग्न मा संवाद गर्न । राम्रो किस्मत । मान्छे मा आउँदै सबै मलाई, वास्तवमा यो एक ठूलो भावनात्मक बढावा किराना पसल वा स्थानीय सुविधा धेरै राम्रो ठाउँमा मान्छे भेट्न र तिनीहरूलाई देख्न रूपमा तिनीहरूले बारे मा जाने आफ्नो दिन छ । किराना पसल राम्रो हुन सक्छ रूपमा एक सामान्यतया बढी समय बिताउनुहुन्छ । म भन्न पर्छ भनेर भन्दा म जान हरेक समय, ठूलो पसलहरु, म देख्न कसैले म रुचि पूरा गर्न । खुद्रा पसलहरु पनि । म अनुमान म जस्तै मान्छे चासो देखाउन वा पहिलो कदम बनाउन, यति मा आएको मान्छे । लिन एक मौका छ । बाहिर जाँच महिलाहरु मा स्टोर र तिनीहरूलाई कुरा गर्न.यो चोट सक्दैन भनेर धेरै. एकल मान्छे सोधेर यो क्यू (मा) धेरै तातो तपाईं मान्छे देख्न बस मा.
सामान्यतया स्टोन सामना, सही
खैर, भने सबैलाई आए बस मा के संग तिनीहरूले मनमा प्रेम जस्तै, चित्रकला, गायन, आफ्नो अध्ययन को केही क्रमबद्ध, एक ठाँउ मा विश्व तिनीहरूले प्रेम, एक पकवान छ, तिनीहरूले बनाउन जाँदैछन्, त्यसपछि व्यक्ति हुनेछ, यो विश्वास वा छैन, अचानक अधिक आकर्षक छ । हामीलाई लिन कि संसारमा कुनै पनि ठाउँमा, देश एक पल्ट, स्कूल, किराना किनमेल, काम ठाँउ । भने पनि कसैले एक यो सम्भव छ गर्न ल्याउन व्यक्तिहरूलाई धेरै सार मा सानो ठाउँ छ । तस्वीर, केही सान्त्वना, कम्बल, एक कम्बल, मनपर्ने कलम, र केहि सम्झाउँछ कि तपाईं के तपाईं को प्रेम, जो तपाईं छन्, र के आफ्नो अतीत अनुभव भएको छ । सबैका कुनै कुरा, उमेर वा संस्कृति, प्रेम गर्न कसैले देख्न भइरहेको साँच्चै अर्थपूर्ण छ । बिर्सन एक तपाईं लागिरहेका छन् रूपमा तपाईं तल हिंड्न सडक, जबसम्म यो छ आफ्नो धेरै आफ्नै छ । भूल मा रहनसहन, जबसम्म यो मजा लागि र तपाईं को प्रकार गर्न आफैलाई जाने गरौं । सबै हालतमा लगाउने यो माथि गर्न आफ्नो प्रमुख विशेषताहरु, राम्रो चित्रण तपाईं कसरी महसुस छन् कि दिन, र गर्न उच्चारण लुगा तपाईं लगाएका छन् । भूल जहाँ बारेमा तपाईं खरीद छन् आफ्नो लुगा र कति, तर जिप सीधा टुक्रा कपडे को भनेर तुरुन्तै आफ्नो आँखा फसाउन र आफ्नो ट्रयाकहरू मा तपाईं रोक्न कुनै कुरा पसल छ । लुगा किनभने तपाईं सामान्यतया दोकान त्यहाँ किनभने, यो बिक्री मा छ, वा किनभने को भन्दा अन्य कुनै पनि कारण यो तपाईं को लागि, त्यसपछि यो पारित गरेर जाने र लुगा लागि आफ्नो हृदय बाहिर रुन्छिन् । हांसो पाउन भने तपाईं हास्यास्पद कुरा बोल्न, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ केहि थप्न तपाईं पाउन महत्त्वपूर्ण छ, र ऐन निश्चित तरिका जब तपाईं काम गर्न चाहनुहुन्छ कि तरिका, र छैन किनभने, तपाईं लाग्छ, यो अन्य व्यक्ति पाउनुहुनेछ यो आकर्षक छ । सबै पछि, जब एक सम्बन्ध छ अन्तमा गठन, ढिलो होस् वा पछि सूत्रहरू हुनेछ खुला माध्यम, यो लुकाइन् भागहरु देखाउन हुनेछ. किनकि म कहिल्यै बाहिर जान क्लबहरू वा बारहरू, म अनुमान को संभावना बैठक कसैले नाटकीय कटौती लागि मलाई । म अन्य मानिसहरूलाई लागि बैठक मार्फत कसैले मित्र शांत हुनेछ, भनेर बाटो बस एक टिप्न-अप दृश्य । म भेट मेरो अन्तिम प्रेमी अनलाइन, जो कुरा म कहिल्यै विचार म के थियो, तर त्यो हुन लागे, एक साँच्चै ठूलो मान्छे हो । किसिमको लिन्छ को मौका बैठक बाहिर मान्छे को प्रश्न छ । भएको छैन, कुनै पनि नर्स, पैसा, वा समय प्रकारको हत्या. जबसम्म एक मान्छे मा चल्छ जहाँ म काम वा समान मा मलाई मा किराना पसल छ । त्यहाँ साँच्चै कुनै संभावना भन्दा अन्य अनलाइन संग माइस्पेस उहाँले प्राप्त हुनेछ कुरा गर्न मलाई । जीवन बस पनि माग कहिलेकाहीं. सबै भन्दा राम्रो तरिका पूरा गर्न एक केटी छ, सामान्यतया एक अनलाइन च्याट. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् थाह, तिनीहरूलाई मा एक मा एक आधार र कुनै प्रतियोगिता छ । म जस्तै पूरा गर्न मान्छे या त एक पल्ट मा वा मेरो काम हो । मान्छे माथि आउँदै मलाई च्याट गर्न मा एक जिम वा क्लब हो । यो मलाई थाहा दिन्छ कि तिनीहरूले साँच्चै छु लाग्छ प्यारा र प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ गर्न, मलाई थाहा छ, राम्रो छ । म एम एक सानो शर्म बैठक तर म धेरै सजिलो जा र एक केटा सहज महसुस, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, किन गर्छ यो अजीब महसुस राम्रो महसुस भइरहेको बारे एकल चाहने तर एक प्रेमिका तर अन्य समयमा दुखाइ भइरहेको एकल चाहने एक प्रेमिका छ ।
← इटाली च्याट भावनाहरु
कामुक मुठभेडों - सभाहरूमा →